I-Redmi Pro 2 ene-Snapdragon 855 iya kuba nokunxibelelana kwe-NFC, ngokwe-Lu Weibing | Zonke iinkonzo ze-intanethi
Ifowuni entsha engummangaliso kaRedmi, kuthiwa iyabizwa I-Redmi Pro 2, izakufika kungekudala nge-chipset Snapdragon 855, Kwaye ngaphambi kokuba yenzeke, umphathi jikelele weRedmi u-Lu Weibing utyhile kwi-Weibo entsha yeposi ezinye izinto ezongezelelweyo zesixhobo.
Iflegi elandelayo, enokusisixhobo esinexabiso eliphantsi nge-SD855, izakuxhasa i-NFC kunye nokutshaja ngaphandle kwamacingo. Kufanelekile ukuba sikhankanye ukuba uLu uqinisekisile i-bezels ezibhityileyo kwisixhobo esilandelayo esiza kufika kungekudala.
Kwinyanga ephelileyo, u-Xiaomi u-CEO u-Lei Jun wabonwa nge-redmi SD855 ye-smartphone. Nangona kunjalo, ngelo xesha uyilo lwalungacacanga ncam, kodwa, ngenxa yeziqinisekiso ezilandelayo, baqinisekisa ubukho besixhobo.
Iposi likaLu Weibing ku-Weibo malunga neRedmi Pro 2 ene-Snapdragon 855
U-Lu Weibing sele eqinisekisile ezinye zeempawu zesixhobo, ezinje ngobukho be-3,5mm audio jack, imodyuli yekhamera kathathu, phakathi kwabanye. Ingaphezulu kokucacileyo ukuba iya kuba sisiphelo esiphakamileyo, akusekho nto ingako yokuphatha i-SoC enamandla kakhulu eQualcomm.
Un kutshanje avuza ividiyo watyhila eyakhe ukuseta kwekhamera yesithathu kunye nesikena somnwe ngasemva. Ngaphandle kwalokhu, umphambili kulindeleke ukuba uphathe umboniso opheleleyo kunye ne-bezels ezincinci, umlinganiso obonakalayo wesikrini ukuya emzimbeni, kunye nekhamera ye-hole-punch, kodwa ngokungafaniyo nochungechunge lweGPS S10, le iya kuhlala kwiziko eliphezulu isikhundla kwaye hayi kwikona.
Umhla wokuphehlelelwa kweRedmi ngeSpapdragon 855 yacetyiswa nguLu Weibing
Inkampani yaseTshayina ihlala ivelisa amarhe malunga neRedmi Pro 2, kodwa isazisi kunye neenkcukacha eziphambili zesixhobo zisephantsi kwesongelo. Abanye bathi le fowuni intsha inokuba sesikweni ngasekupheleni kwale nyanga. Ngaphambi koko, URedmi uza kutyhila iRedmi Y3 ngo-Epreli 24 ngekhamera ye-selfie ye-32 MP, inotshi yamanzi kunye nebhetri enkulu.
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izaziso » I-Redmi Pro 2 ene-Snapdragon 855 iya kuba nokunxibelelana kwe-NFC, ngokwe-Lu Weibing